Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် မစ်ဆူဘီရှီအပ်ချုပ်အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူနှင့် မစ်ဆူဘီရှီအပ်ချုပ်အစိတ်အပိုင်းများ ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
Hongcheng Precision Industry Co., Ltd. ၏တဦးတည်းရှိခဲ့ မစ်ဆူဘီရှီအပ်ချုပ်အစိတ်အပိုင်းများ ထို့ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်သူများ, ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ, ဆန်တင်ပို့သူများအတွက် Taiwan။ ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီအရည်အချင်းကိုကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အသင်းကအလုပ်ကို centralized စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှုကိုထူထေ​​ာင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာလူ့-based စီမံခန့်ခွဲမှုပုံမှန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ, စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောအရည်အသွေးပြည့်စီးဆင်းမှုစတင်ရေး။ အဖွဲ့အစည်းကိုသင်ယူခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်န်ထမ်းများအလုပ်ကြိုးစားရန်အတူတကွစည်းလုံးညီညွတ်ကြောင်း, ယုံကြည်ပထမဦးဆုံးဖောက်သည်, အရည်အသွေးဦးစားပေး, oriented လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစိတ်ကူးနှင့်အတူကျနော်တို့ပိုကြီးပြီးအားကောင်းသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့ဖောက်သည်ပိုတန်ဖိုးထမ်းဆောင်နိုင်, နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှပိုပြီးမြှုပ်နှံထား။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြ၏။
ကုမ္ပဏီသည်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးကျွမ်းကျင်သောစက်ရုံထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သော မစ်ဆူဘီရှီအပ်ချုပ်အစိတ်အပိုင်းများ ပေးသွင်းသူဖြစ်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းစုဆောင်းနှင့်အတူ။ ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထူးချွန်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များတည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးနှင့်အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများရှိသည်။ အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကို ပေး၍ အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးသောကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်နှင့်ဆန်းသစ်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များနှင့်ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
ပုံစံ - Mitsubishi spare parts
Gold Wheel နှင့် Mitsubishi တို့သည်အလွန်နီးစပ်သောအဖွဲ့များဖြစ်သည်.ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံအပိုပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နှစ်ပေါင်းများစွာ Gold Wheel သို့ထိုအပိုပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်,ဆေးထိုးအပ်...စသည်တို့.အလွန်မြင့်မားသောအရည်အသွေးရှိသောမစ်ဆူဘီရှီဓါးမည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုသင်တွေ့နိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sewingmachineaccessories.com.tw/my/mitsubishi-sewing-parts.html
ShingRay ပုံစံ FW-740 အပိုပစ္စည်း07400629/07400744 ဓါးသွား၏ပစ္စည်းသည် Flatseamer ဓါးတိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်,Yamato ထက်ပိုကောင်းတယ်.ဤပစ္စည်းကိုဥရောပမှဝယ်ယူပါသည်.အပေါ်ယံပိုင်းအားဖြင့်အခြားအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ရွေးစရာတစ်ခုရှိပါသည်.၎င်းသည် Yamato သို့မဟုတ် Pegasus စက်အတွက်လည်းသင့်တော်သည်.
မစ်ဆူဘီရှီအပ်ချုပ်အစိတ်အပိုင်းများ ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ မစ်ဆူဘီရှီအပ်ချုပ်အစိတ်အပိုင်းများ ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ မစ်ဆူဘီရှီအပ်ချုပ်အစိတ်အပိုင်းများ ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan
ShingRay ပုံစံ FW-787 အပိုပစ္စည်းP16-၉/P16-26 ShingRay တွင် tungsten သံမဏိရှိသည်’s ကိုဓား.ဒါဟာ overlock ဓါးအမျိုးမျိုးအတွက်အများဆုံးကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်.ဆန့်ကျင်-unraveling function ကို ShingRay တွင်လည်းရနိုင်သည်’s interlock စက်.
Siruba C007 interlock အပိုပစ္စည်းများUT506/UT507 Siruba သည်ထိုင်ဝမ်တွင်အလွန်ကျော်ကြားသောအပ်ချုပ်စက်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်.ငါတို့ကဓားနှစ်ချောင်းကိုတရုတ်ကိုရောင်းတယ်.တရုတ်ထုတ်လုပ်သူတော်တော်များများကငါတို့ရဲ့ဓားတွေကိုအခြားသူတွေထက်ပိုကြိုက်ကြတယ်.ငါတို့သည်ကြားဖြတ်ဓားများထုတ်လုပ်ရန်ထိပ်တန်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်.
အစ်ကို Spare Parts
အစ်ကိုအပိုပစ္စည်းအစ်ကိုအပိုပစ္စည်း ညီအစ်ကိုအုပ်စုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးလက်တွဲဖော်များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်.ငါတို့က ၁၉၉၅ လောက်မှာ Brother နဲ့လုပ်ငန်းစခဲ့တယ်.ငါတို့သည်ထိုအပိုပစ္စည်းများကိုစစ်မှန်သောပုံဆွဲခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောအစိတ်အပိုင်းများထက်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်.
Pegasus အပိုပစ္စည်းများPegasus အပိုပစ္စည်းများ ကျွန်ုပ်တို့သည် ShingLing အားအပ်ချုပ်စက်စင်းများပေးခဲ့သည်.ShingLing သည်နာမည်အကြီးဆုံးအပ်ချုပ်စက်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်.သူတို့၏စက်များသည် Pegasus နှင့်ဆင်တူသည်.ShingLing ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် Pegasus ထက်များစွာသာလွန်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သေချာသည်.